Ikhaya STARS E-EUROPE Ama-Quincy Promes ebuntwaneni bamaNqaku kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa ngegama lesidlaliso "The Money Wolf“. Indaba yethu yeQuincy Promes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
Ukuphila nokukhuphuka kwamaQuincy e-Quincy kwethulwe nguLifeBogger. Ama-Credits wesithombe- Instagram futhi Twitter
Ukugeleza kufaka phakathi impilo yakhe yobudala / isizinda somndeni, ukwakha imfundo, umsebenzi wasemsebenzini wasemncane, umgwaqo odumile, ukukhuphuka edumeni, impilo yobudlelwano, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni, indlela yokuphila namanye amaqiniso angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi unethalente eliphakeme kakhulu iso lokujubane nokushaya amagoli. Kodwa-ke, bambalwa kakhulu abalandeli bebhola abacabanga nge-Quincy Promes Biography yethu ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UQuincy Anton Promes wazalwa Usuku lwe-4th lukaJanuwari 1992 kunina (umphathi wendlu) nobaba (owayengumdlali webhola lezinyawo) edolobheni lase-Amsterdam, eNetherlands. Weza emhlabeni enye yamadodana amabili izelwe kubazali bayo baseSurinamese abathandekayo ababoniswe ngezansi.
Hlangana nabazali bakaQuincy. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Yize azalelwe eNetherlands, uQuincy Promes unomndeni wakhe odabuka eSuriname, izwe laseNingizimu Melika nelalikade liyikoloni laseNetherlands. QAPHELA: Leli yileli izwe -balandeli bebhola abalandela; UClarence Seedorf, u-Edgar Davids noJimmy Floyd Hasselbaink kwaqhamuka.
UQuincy Uthola Umsuka Womndeni: Abazali bakhe ngaphezu kwemindeni eminingi yaseSuriname babephakathi kwalabo abathuthela eNetherlands kuwo wonke ama-1990 okuqala ngenxa yesimo somnotho esinzima ezweni laseNingizimu Melika. Futhi ukuqaphela, tabantu baseSuriname banemindeni yabo abavela e-Afrika engezansi kweSahara eningi labo bokhokho baseNtshonalanga Afrika. Bheka ngezansi imephu esisizayo ichaza izimpande zomndeni wakwaQuincy.
U-Quincy Promes Roots Womndeni Uchaziwe. Isikweletu Sezithombe- I-ULC
Iminyaka Yokuqala: Ama-Qunicy Promes akhula eceleni komfowabo okuncane okwaziwayo ngaye e-Amsterdam, eNetherland. Wayengaveli kwimvelaphi enothile yomndeni. Eqinisweni, abazali bakhe babefana nabanye abafuduki edolobheni abasebenza imisebenzi ephansi futhi abangakaze babe nemfundo engcono kakhulu yomsebenzi omuhle onekhola emhlophe. Kusukela esemncane, u-Promes wayengenandaba namaqoqo amasha wamathoyizi njengezipho zabazali bakhe, kuphela ibhola ayeneliswa ngalo.
UQuincy Promes waqala ukudlala ibhola kusukela lapho akwazi ukuhamba. Isikweletu Sezithombe- Twitter
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngokusho kocwaningo, iminyaka engcono kakhulu yokuthola imfundo yebhola isuka ku-6 iya ku-10. KwaPromes, kwaqala kusukela lapho akwazi ukuhamba, sibonga ubaba wakhe owenze imizamo yokuqhubeka nokuphila ngamaphupho akhe ebhola nendodana yakhe. Kufika ubaba obengumdlali webhola lezinyawo e-Amateur eSuriname ngaphambi kokuthi afudukele eNetherlands. Ukuthola umuntu othanda ibhola kubaba, bekulula ukuthi amaPremi athandane nalo mdlalo omnandi.
UQunicy Promes Mum ubengalungile ngebhola lakhe: Ukuze aqhubeke nokuphila ngamaphupho okuphila kukababa wakhe, uPromes wavuma kusenesikhathi ukuthi wavuma ukuba ngumdlali webhola. Wayekhuthele ethembeni elizimisele ngokuba pro, umdlalo owambona edlala ibhola ekuseni, ntambama nakusihlwa. Le ntuthuko ayimhambelanga kahle umama wakhe owayekhathazwa yimali yakhe encane engafundanga ngokwanele, ukuhlala isikhathi sekwephuzile engakhumbuli ukwenza umsebenzi wakhe wesikole nowendlu. Ngenxa yalokhu, uPromes kwesinye isikhathi wayezokwakhiwa ngunina. Ukuthathelwa ngaphakathi kuye akuzange kumise izifiso zakhe zokuba pro.
Iminyaka Yokuqala Yokufika Kwe Quincy. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Injabulo iveza amalungu omndeni wakhe okubalwa kuwona umama wakhe owayengabaza ukusebenza kwakhe ngaphambili ngaphandle kwemingcele ngesikhathi uPromes edlulisa izivivinyo ze-Ajax nokuzenza ukuthi abhalise nekilabhu yakubo. Ngesikhathi ngisesikhungweni semfundo ephakeme, u-Promes wakhonza izithombe Ronaldinho. Kodwa-ke, ubaba wakhe waqhubeka eyisibonelo sakhe esibaluleke kakhulu, owayenaye kuyo yonke iminyaka yakhe yokuqala ne-Ajax.
UQuincy Uthola Ukuphila Kwasekuqaleni Ngebhola. Isikweletu Sezithombe: Instagram
Njengoba uQuincy UPrince wayelokhu evuthwa, wazibona esezinza kahle impilo ne-Academy. Wayenguye uhlobo oluphumayo lwengane- uhlobo lomholi owengamele izindaba zeqembu lakhe. Ngezansi kwesiqeshana sobufakazi bevidiyo yengane enesibindi njengoba yenza imisebenzi yayo yobuholi ne-Ajax TV.
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Lapho Kuqhubeka Kunzima: Ngaleso sikhathi eneminyaka engu-16, uQuincy Promes 'waqala ukungena kuzo zonke izinhlobo zezinkinga nabaphathi bekilabhu. U-Ajax wamsola ngokukhombisa yokuziphatha okubi, intuthuko ebisongela iziqu zakhe zemfundo futhi hlala eklabhini. Kuyadabukisa ukuthi ngonyaka u-2008 (osakhula 16), Inkontileka kaPromes ne-Ajax inqanyulwe futhi watshelwa ukuthi ashiye ikilabhu ngenxa yalokho okwakubizwa ngokuthi “Ukuziphatha Okubi”.
Cishe Ukuyeka Ibhola: Ukwenqatshwa ku-Ajax kwabangela izinhlungu eziningi kangangokuba uPromes wacabanga ukuyeka ibhola. Kwakuthatha umzamo wabazali bakhe (ikakhulukazi umamakhe) ukumncenga ukuthi abuyele ebholeni, kumenze aqonde ukuthi- Uthisha omuhle kakhulu kwaba Ukwehluleka. UPrice washeshe wabona ukuthi kulungile ukwenza amaphutha futhi lokhu kumsize ukuthi akhule abe ngumuntu ongcono.
Siqhubekela phambili: IPromes ithole enye iklabhu- i-HFC Haarlem lapho edlale khona unyaka owodwa ngaphambi kokuthi ikilabhu idilike. Ngaphambi nje kokuqothuka, wafuna indlela yokuphunyuka ngokuhambela izivivinyo neFC Twente eyamvumela ukuthi ajoyine izifundi zazo.
I-FC Twente yaba yigxathu elifanele kuye njengoba ethole iziqu ze-academy kanye nethimba eliphakeme eqenjini labadlali. Efunda kokugcina kwakhe, ama-Promes aqale ukukhombisa ukuvuthwa okukhulu kubuye kwashiye iphimbo. Nangesizini efanayo, indlela avuthwa ngayo yambona enikwa ukaputeni weJong FC Twente ngendondo nomqeqeshi waseDashi, uPatrick Kluivert. Kamuva wathuthuka ngemalimboleko nekilabhu yaseDashi ebizwa ngegama elithi 'Hamba Ngaphambi Kwama-Eagles'lapho ahlangana khona no-Erik ishumi uHag waba ngumdlali wakhe omuhle kakhulu. UPromes wayengazi ukuthi ukwethembeka kwakhe kuzomenza u-Erik ayishumi uHag (umqeqeshi we-Ajax wesikhathi esizayo) kungaba ngumuntu ozombuyisela ku-Ajax, iklabhu yamaphupho akhe.
UQuincy Promes no-Erik eziyishumi uHag basebenze ndawonye isikhathi esithile kwiGo Gohead Aagles. Isikweletu Sezithombe- I-AdNl
Isinqumo Esikhulu: Naphezu kwento yokuvuthwa, ama-Promes azimisele ngokudlala kahle, athole okunikezwa okungcono futhi axoxisane ngemali enkulu. Ukuphupha kukhulu lokho, iqembu lakhe labadlali lidlale amahlaya, limbize ngokuthi “Imali Wolf“. Ngemuva kokushaya amagoli e-11 ku-FC Twente nenye i-13 yokubolekwa kwemali eboshelwe I-Go Ahead Eagles football club, Ubuhle bePromes baqala ukuheha inqwaba yamakilabhu aseYurophu.
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Izinto ezinhle zaqala ukuza ngendlela yakhe. Okokuqala, uPromes uthole ucingo luvela eqenjini lesizwe laseDashi. Okwesibili, izingxoxo zakhe neSpartak Moscow zibangela ukuhamba kwemali eningi njengoba ayephupha njalo. Abantu abaningi bangabaza ukuthi uPromes uzikhethela ini yaseRussia ababeyihlehlisa IMALI Kwakungekho: Isici se-1 kuye hhayi Ibhola. Lokhu kumbone efaka igama elithi “The Money Wolf".
Impilo eRussia: Inzuzo ishiyelwe iRussia isencane kangaka, inengqondo yokufakazela abagxeki bayo ukuthi ayilungile. Ngesikhathi eseRussia, wenza isitatimende ngengcebo yakhe ngaphambi kokusebenza kwensimu. Mayelana nokukhombisa ingcebo yakhe, uProut wenza ama-video lapho akhombisa khona izingubo ezibizayo, izinto azithengile ngemali ezihambisana nokukhushulwa kwabezindaba egumbini lakhe lokulala. Lokhu kuphinde kwaphakamisa ukungabaza ezingqondweni zabalandeli ukuthi ngabe uPromes angakwazi yini ukuphatha impilo njengomdlali webhola. Ngemuva kweminye imicabango ngokuziphatha kwakhe ebuya ezomzingela, uPromes uthathe isinqumo sokususa wonke ama-video, abuyele emuva agxile emsebenzini wakhe.
UProps waba nesiqalo esihle emisebenzini yakhe yaseRussia njengoba ethola izinhloso eziningi wanikela nabasizi abaningana abahle. Umpetha onekhono onekhono ngokuvuthwa okhulayo waba umdlali onekhono kunabo bonke endizeni ephezulu yaseRussia njengoba ephumelela ukuwina izicoco eziningi zeligi ezinyangeni ezizuzwayo. Ethulisa abagxeki bakhe, uProut uqhubeke waba ngumshayi magoli aphezulu kakhulu kwiligi. Amagoli akhe asize iSpartak Moscow ukuthi iwine iligi yokuqala yaseRussia (2016-2017), iRussia Super Cup (2017) kanye nomdlali wesikhathi we2 wokuklonyeliswa.
UQuincy Promes Rise to Fame Indaba- Uwine konke okuzobe kunqotshwa eRussia. Isikweletu Sezithombe- Twitter futhi Instagram
Esikhundleni sokudilika, ubuhlakani bebhola bukhule kusuka emandleni buqine buye emandleni, buqhubekela kuye USevilla futhi kamuva ne-Ajax, lapho abuyisele khona okulungile. Ngesikhathi sokubhala, amaQuincy Promes okwamanje aphakathi kwe umugqa wokukhiqiza ongapheli wabasubathi bebhola elimangalisayo abavuselela ibhola laseDashi ngemuva kokuhluleka kweNdebe Yomhlaba ye2018 yezwe. Abanye, njengoba besho, manje nguMlando.
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Nge-Rise to Fame yakhe ebholeni, kunesiqiniseko sokuthi abalandeli abaningi bebhola, ikakhulukazi abahlonishwayo besifazane kumele bazibuze ukuthi uQuincy Promes unentombi yini noma angashadi futhi usafuna.
Ubani uQuincy Promes Girlfriend?… Akakashadi futhi uyacwaninga?… Image Isimo- i-Instagram
Akukho okuphikayo ukuthi uQuincy Promes ubukeka emuhle, ukuvuthwa, kuhambisana nokuhlonishwa komsebenzi wakhe kwakungeke kumenze abe yisoka nomyeni ongcono (okumanje kungaleso sikhathi sokubhala). Ngemuva komdlali webhola ophumelelayo, kukhona unkosikazi obukhazikhazi. UPrice ushade nonkosikazi wakhe (okufanekiselwa ngezansi) futhi bendawonye, ​​banezingane ezintathu- amantombazane amabili nomfana.
Ingane yabo yesithathu, egama linguNoakin, yazalwa nge-8 Meyi 2017, ngemuva nje kokuthi iSpartak Moscow iqinisekiswe ukuthi ingompetha beligi.
Uthi bewazi?… Unkosikazi kaQuincy Promes wabeletha indodana yakhe yokuqala nengane yesithathu (uNoquin Aphiwe Promes) kwi-8th kaMeyi 2017 ngemuva nje kokuba iSpartak Moscow iqinisekiswe ukuthi ingompetha beligi.
Njengokuziphatha kwakhe kwangaphambilini, umshado kaQuincy Promes uye waba nesiphithiphithi ezikhathini zamuva. Kwake kwenzeka isikhashana, uPromes walethwa ekuhlolweni kwamehlo omphakathi lapho eboshwa ngokushaya unkosikazi wakhe ngoJuni 2018. He wadedelwa ngebheyili, ngesikhathi kuqhubeka uphenyo.
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi uQuincy Promes Life Life off the pitch kungakusiza uthole isithombe esiphelele sobuntu bakhe.
Ngaphandle kwephimbo, uProut uchitha isikhathi nomngani wakhe omkhulu- Memphis Deplay. Ngisho nawe badlala emazweni amabili ahlukene (ngesikhathi sokubhala), umbhangqwana uvama ukukhuluma nomunye nsuku zonke. MANJE, Yini laba laba laba labafana ngayo?… Impendulo ngukuthi Ezomculo Nama-tattoos.
Ukwazi u-Quincy Kuzuzisa Ukuphila Komuntu ku-Pitch. Isikweletu Sezithombe- I-DailyMail futhi Ilanga
Uthi bewazi?… Prives wake wakhipha i-rap entsha eyinqaba nomuntu oyedwa osezingeni lomhlaba Memphis Deplay. Begqoke amaketanga egolide abiza kakhulu, ividiyo yabo ye-rap yaqala ngababili behleli futhi behleka iRolls Royce kanokusho ngaphambi kokubeka ubucwebe babo ngaphezulu kwemoto. Memphis Depay waqala ukuklebhula ngaphambi kokuba Imbuyiso enezifiso eziningi ithathe indawo kumngane wakhe omkhulu. Ngezansi ucezu kobufakazi- Le vidiyo.
Ngaphezulu kwe-Quincy Promes Life Life, unendlela yemvelo ye Russia- izwe elikhulu kunawo wonke emhlabeni okwamenza wathola okungcono kakhulu emsebenzini wakhe. Ebusika, iPromes ibone amadolobha embozwe amajazi amaqhwa amhlophe qhwa, okwenza wonke umbono wakhethekile futhi wahlukile. Kwezinye izindawo zemvelo avakashela kuzo, indawo eneqhwa (njengoba kuphawulwe ngezansi) Inomqondo omuhle- esinye nje isizathu esenza athandane neRussia.
UQuincy Uthola Amaqiniso Wokuphila Komuntu kude nebhola- umbono wakhe nesipiliyoni sakhe neRussia. Isikweletu Twitter
Okokugcina ukukholelwa kwakhe ukuthi abalandeli bebhola laseRussia abalubandlululo ngokobuhlanga. UQuincy Promes Family uthole okungcono kakhulu eRussia kukho konke ukuhlala kwabo, ngenkathi edlalela iSpartak Moscow. Umdlali webhola lezinyawo naye nabazali bakhe akazange ahlangane nobandlululo naphezu kokukholelwa ukuthi ubandlululo luyimvelo esifundeni.
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Indlela yokuphila
Amaqiniso we-Quincy Promes Indlela yokuphila yangempela izokusiza uthole isithombe esiphelele sempilo yakhe. Mukulinganisa imali eningi ngebhola kudlula ngendlela yokuphila engathandeki ibonwa kalula yimoto yakhe eyi-Mercedes ebomvu esifanekiselwa ngezansi.
UQuincy Prives LifeStyle- Ushayela imoto eyinqayizivele
Futhi endleleni yokuphila, ukunquma phakathi kokusebenziseka nenjabulo okwamanje akusona isinqumo esinzima sokuthola. Umdlali webhola elihle njalo obukekayo akabaluleki kuphela ngokugqama kwakhe ekwakheni kodwa amandla okuthenga amawashi abizayo futhi aphile namaphupho akhe asolwandle.
UQuincy Uthola UbomiStyle- Imibuzo ebuzwa kulokho asebenzisa imali yakhe kukho. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Ukuthuthukiswa kwabathandi bezinyawo njengabo bonke abanye abantwana kudinga usizo lwamalungu omndeni, ikakhulukazi bobabili abazali, abazali bakaQuincy Promes bammelele, abasize bafike lapho ekhona namuhla.
Kufika ngesikhathi sokubhala bahlala e-Amsterdam nonkosikazi wakhe, izingane zabo ezintathu, abazali bakhe kanye nomfowabo. Njengoba ehlanganiswe nomphakathi waseDashi, amalungu omndeni wakhe manje athola izinzuzo zokuba nezawo (okondla) ukwakha ingxenye yomndeni wakhe ekuzimeleni kwezezimali, konke kubonga ngomsebenzi webhola ophumelelayo. Inzuzo sUsebenzisa umama wakhe njengethambo lakhe langemuva kanye nalowo owamgqugquzela kakhulu ukuthi abuyele ebholeni lapho edonswa phansi yi-Ajax.
UQuincy Promes ubonakala esondelene kakhulu nonina kunobaba wakhe. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ama-Quincy Promes Dembele Ubuntwana Bendaba ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukuhlikihla Amabhele nge-Busta Rhymes: Lobu budlelwano phakathi kwebhola nalokho esingakubiza kakhulu ngokuthi 'ukuklebhula' kube khona isikhathi eside kanti uQuincy Promes usanda kukhulisa umdlalo wakhe. Ngemuva kokugqolozela emcimbini we-hip-hop, ubuntu bakhe kwezokuzijabulisa bumbone esehlikihla amahlombe ngamanye amafutha kumkhakha onjengeBusta Rhymes.
UQuincy Uhlakulela Uthando ngoRappe umbone ehlikihla amahlombe ngeBusta Rhymes. Isikweletu Sezithombe- Instagram
Ngaphandle kokungabaza, iQuincy Promes iyisikhuthazo kuhlu olukhulayo lwabathandi bebhola abahamba phambili kunabo bonke kusukela kudala nanamuhla.
I-AZ ye-Quincy Promes 'Tattoos: Ngayo yonke imali eza naye ekubeni ngunkulunkulukazi emhlabeni wonke, uQuincy Promes akenqikazi ukungcolisa umzimba wakhe kuma-tattoos. Njengama-tattoos amaningi emhlane wakhe ubhalwe nge-tattoo 'Pharoah waseGibhithe“. Ngasohlangothini lwayo lwangaphambili kuqukethe zonke izinhlobo zokubhalwa kwe-tattoo ezibonisa impilo yakhe edlule.
Ukuqonda uQuincy Kuthola I-tattoo- Umhlane wakhe kanye nohlangothi lwangaphambili. Isikweletu Sezithombe- Twitter futhi Instagram
Kuwo wonke ama-tattoos akhe weQuincy Promes, ubuciko bomzimba obuheha iso kakhulu obumele izintshisekelo zakhe, ezibhalwe ngokuqina ngathi 'QP' futhi wabeka emuva kwekhanda lakhe.
U-Quincy Promes Tatato- Ikhanda lakhe Futhi Ukuqoqwa Kwezandla. Isikweletu Sezithombe- Twitter
Okokugcina uQuincy Uthola Amaqiniso Angaziwa- Ubenokuhlangana ne-Brazil Lean Legend, UPele- Ngenkathi esengumfana omncane, abazali bakaQuincy Promes basiza indodana yabo ekubhaliseni ngokuphelele ku-Ajax nayo eyamnika ithuba lokuhlangana neKing yeBhola- “UPele".
UQuincy Promes wake waba nokuhlangana noPele. Isikweletu Sezithombe- Twitter
Ngaphambi kokuthi abhekane ubuso nobuso ne-Legend yaseBrazil, uQuincy Promes wayengabaza yena kancane, ecabanga ukuthi uzotshela noma abuze umuntu owayeyingxenye yomlando. Metting Pele wayefana nokuhlangana nothile encwadini.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iQuincy Promes yethu Yobuntwana Indaba ye-Plus Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Ivan Rakitic Ubuntwana Indaba Plus Untold Biography Facts